Baahida loo qabo Xawaare: Kul kul si diirada loo saaro dhaqanka baabuurta magaalada - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Baahida Xawaaraha: Kul kul si diirada loo saaro dhaqanka baabuurta magaalada
Farshaxanka elektiroonigga ah wuxuu ku dhawaaqayaa in loo baahan yahay Xawaare: Heat wuxuu sii deyn doonaa 8 November ee soo socota PS4, Xbox One iyo PC.
Isboortiga iswiidhishka ee Ghost Ghost (oo horey loo oran jiray EA Gothenburg) wuxuu doonayaa inuu riixo xadka oo dhan Baahida Xawaaraha: Kuleylka. Si ka duwan daadadkii iibiyay ciyaar leh Maraqa "Miami kuxigeenka" mahadsanid jawi u qalma sanadihii 1980, qofku waa inuu ugu dambeyntii filayaa inuu isbeddel ku yimaaddo wakhti casri ah, sida opip-kii hore. Madaxa Palm City, waa adduun furan halkaas oo wadooyinku istaagaan ay noqdaan kuwo caan ah. Inta lagu jiro maalinta, waxay ka qeybqaataan Speedhunters Showdown, oo ah tartan ay ku kasbadaan lacag ay ku habaynayaan oo ay ku horumariyaan gawaarida, halka habeenkii, ay qatar geliyaan iyagoo ka qeybgalaya tartamada qaawan inkasta oo ay jiraan booliis musuqmaasuq iyo waasac.
Gunno loogu talagalay Xawaaraha: Kuleylka
Ciyaartoyda horay u dalbada Baahan Xawaaraha: Kuleylka iyada oo loo marayo Baahida Xawaaraha: payback waxay heli doonaan qiimo dhimis 10% si loogu abaalmariyo daacadnimadooda. Kuwa qaata Daabaca Deluxe waxay heli doonaan gawaarida KS Edition (BMW i8 Coupe, Mercedes C63 AMG Coupe iyo Chevrolet Corvette Grand Sport), dhar gaar ah iyo casriyeyn si kor loogu qaado lacagta iyo sumcadda dabeecad ahaan.
"Waxaan siineynaa ciyaartoy xitaa xitaa fursado badan oo ay ugu istaagaan oo ay isbaraan"Ayuu yidhi Riley Cooper, agaasimaha hal abuurka ee Ciyaaraha Ghost. "Taageerayaasheena ayaa cadeeyay inay rabaan gawaari badan, xulasho dheeraad ah oo lagu hagaajiyo iyo caqabado badan. Waan tixgelinay codsiyadooda oo dhan. Laga soo bilaabo qaabka dabeecaddaada illaa waxqabadka gaarigaaga illaa qaabka wadistaada, kulankaan cusub wuxuu noo oggolaanayaa inaan siino ciyaartoy qalab u oggolaan doona inay soo bandhigaan hal abuurkooda."
Baahida Xawaaraha: Kulmiyaha kuleylka waxaa lagu muujiyaa trailer hore
Baahida Xawaaraha: Kuleylka waxaa laga heli doonaa PS4, Xbox One iyo PC sida ugu horeysa 8 soo socota ee November. Macaamiilyaasha Helitaanka EA ama Helitaanka Aasaasiga ah ee Aasaasiga ah waxay awood u yeelan doonaan inay tijaabiyaan seddex maalmood ka hor toban saacadood. Farshaxanka elektiroonigga ah ayaa sidoo kale ku dhawaaqaya in bandhig caalami ah lagu qaban doono 19 bisha Agoosto ee furitaanka habeenka Isniinta ah ee Gamecom 2019.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/need-for-speed-heat-va-miser-sur-la-culture-automobile-urbaine-325294
L’aspirateur robot est presque aussi bon qu’un Roomba à 1 000 dollars, mais il est ramené à 280 dollars aujourd’hui – BGR